Salaadda Saddexmidnimada Quduuska ah. ? Jacayl, Kiisas Adag oo Degdeg ah.
11 Akhriska Min
Ducada Aadaanka Quduuska ah Katooligga jacaylka, kiisaska adag iyo kuwa degdegga ah iyo ilaalinta waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan tan iyo markii ay weydiiso Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah si isku mid ah.
Ereyga Ilaah wuxuu ina tusayaa inuu yahay Aabaha wax walbana leh, ka dib wuxuu ina barayaa Ciise Masiix kan uu isagu Eebbe abuuray nin, oo dhexdeenna ku jiray oo naftiisa u huray bani-aadamka aawadeed, markuu jannada tegey wuxuu naga tegey Ruuxa. Santo iyo hadda waxaan ku xisaabtami karnaa dhammaan saddexda.
Aabaha iyo Wiilku waa jannada, oo Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ku dhexjiraa qalbiyadeenna sidii dab.
Kaniisadda Katooliga waxay leedahay taxane ah salaadda Kuwaas oo loo jeedinayo si gaar ah saddexda ah in si wada jir ah ay u midaysan yihiin, saddexnimadu.
Iyagu waa salaaddaha ka kaca xaaladaha kala duwan halkaas oo gacanta ninku aanu shaqeyn karin ka dibna waxaan ku tiirsanahay duco maxaa yeelay mucjisooyinka Ilaah oo keliya ayaa ku filan.
1 Salaadda ilaa Saddexanka Quduuska ah Waa kuma Saddexanka Quduuska ah?
1.1 Salaadda Ciida Katooliga ee Quduuska ah
1.2 Salaadda ilaa Saddexanka Quduuska ah jacayl
1.3 Salaadda Cibaadada Quduuska ah kiisaska adag iyo degdegga ah
1.4 Ka gaabin difaac
2 Goormaan tukanayaa?
Salaadda ilaa Saddexanka Quduuska ah Waa kuma Saddexanka Quduuska ah?
Midnimada Aabbaha; Wiil iyo Ruuxa Quduuska ahi waa kuwa ka kooban Saddexanka Quduuska ah.
Muuqashadiisa waa tartiib tartiib ah waxaanan ku arki karnaa dhamaantood Baybalka.
Bilowgii, hidde ahaanna wuxuu Ilaahay u muuqdaa isaga oo abuuray samooyinka iyo dhulka iyo uun kasta oo nool.
Kadib Injiillada ah Axdiga Cusub Waxaan aragnaa in Ciise Masiix yimid, oo bikrad ah dhalashadii shaqa iyo nimcada Ruuxa Quduuska ah.
Halkaas waxaan ka bilaabeynaa inaan ogaano nolosha Badbaadiyeha, ka dib markuu dhinto, dib u soo nooleeyo oo uu jannada kor ugu baxo, wuxuu naga tegay ballankii Ruuxa Quduuska ah, laakiin tan waxaa la muujiyey waqti uun ka dib maalintii maalintii Bentakostiga ee ku xusan kitaabka Falimaha Rasuullada Rasuulladu waxay sii wadaan inay na sii wadaan ilaa maanta.
Trinity xoog leh oo ina siiya codsiyada qalbiyadeenna, kuwa in badan oo aan ka samaynno nafta.
Saddexanka Quduuska ah ayaa had iyo goor diyaar u ah inay na dhageystaan.
Salaadda Ciida Katooliga ee Quduuska ah
Farxiyahow Ruuxa Quduuska ah, waxaan kuugu mahadnaqayaa Ilaahayga iyo Sayidkayga, waxaanan kuugu mahadnaqayaa dhammaanta maxkamadda jannada oo dhan iyadoo ku jirta magaca gabadha barakaysan, ee naagtaada aad u jeceshahay dhammaan hadiyadihii iyo mudnaantii aad iyada ku qurxin jirtay, qaas ahaan kan kaamil ah oo ilaahnimada ah sadaqadiisa oo aad ku naaxisay qalbigiisa ugu quduuska ah oo daahirka ah ficil ahaan ee haybaddiisa ugu sarreeya ee jannada ku jira; oo si is-hoosaysiin ah ayaan kugu baryayaa magacaaga naagta weyn, siiso nimcada si aad iigu cafiyo dhammaan dambiyada culus ee aan galay ilaa daqiiqaddii ugu horreysay ee aan dembaabin karo; ilaa imminka, oo aan aad iyo aad uga caloolxumaado, anigoo u qasdanaya inaan dhinto intii aan ka xanaaqi lahaa haybaddaada rabbaaniga ah. iyo mudnaanta ugu sarreysa iyo ilaalinta ugu hufan ee naagtaada aadka u jeceshahay, waxaan kaa baryayaa inaad i siiso aniga iyo N. hadiyadda ugu qaalisan ee nimcadaada iyo jacaylkaaga rabaani ah, inaad i siiso nalalkaas iyo caawimaaddaada taas oo Providence weligiis ah uu go'aansaday inuu i badbaadiyo, oo i hoggaamiyo haa
Salaadda Cibaadada Kaatooligga Quduuska ah waxay leedahay saameyn deg deg ah.
Salaadda, oo ah hub xoog leh oo iska leh kuwa inaga mid ah oo rumeeyey xoogga Rabbiga.
Qalab awood leh oo Kaniisadda Katooliga ay garatay sida loo isticmaalo taasna waxay nooga tagaysaa tusaale, tusaale si aan u ogaanno sida wax loo weyddiiyo, ereyada la adeegsanayo.
Tukashadu ma xuma, waa fursad ay ku baran karaan salaadda, si ay u bartaan sida saxda ah ee loo tukado, taasina waa sababta ay salaaduhu u jiraan inay na hagaan habka.
Salaadda ilaa Saddexanka Quduuska ah jacayl
Magaca Aabaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, Aamiin.
Quduusnimada Quduuska ah, bilowgeheena iyo dhamaadka, xooggayga, iyo caawimadayda iyo caawimadayda rabbaani ah, ee ku nool qalbigayga oo ku jira naftayda oo buuxisa jiritaankayga oo dhan.
Holy Holy Trinity, oo u qalma sharaf oo dhan, sharaf iyo ammaan, waxaan aaminsanahay xooggaaga, Ilaaha ah Aabbaha, Ilaah Wiilka, Ilaah Ruuxa Quduuska ah.
Waxaan si indho la’aan ah u aaminsanahay hadiyadahaaga waxaanan kuu rajaynayaa adiga, rajadayda iyo sadaqadeyda waxaan gacantaada geliyaa, iga caawi inaan kor u qaado iimaankayga oo maalin kasta jacaylkaaga noqdo qof wanaagsan oo aan ku toosiyo dhiirrigelin iyo xamaasad buuxda.
Alxamdulilaah, waxaad tahay isha ay jacaylka iyo noloshu ka soo baxaan, ee aad noogu abuuray si waafaqsan sawirkaaga iyo u ekaantaada, jacaylka aad noo qabtana waxaad u soo dirtay Ilaaha Wiilka ah si uu noloshiisa noogu furto oo uu inaga badbaadiyo dembiga, aniga ...
Waan ku siinayaa oo waa inaad quduus ka dhigtaa waxa ku nool oo dhan markaan ahay aad iyo aad baan uga xumahay waxaan kaa codsanayaa inaad iga cafiiso wixii khaladaad ah ee aan galay iyo dembiyadii aan galay ilaa maanta oo aniga iga fogaada.
Holy Trinity, Waxaan kaa baryayaa inaad ii naxariisato, oo i caawiso, si ay naftaydu u buuxdo xasil, iyadoo naftayda u beddesho bukaan, waxgarasho, is-hoosaysiin iyo is-huwan wanaaggaaga.
Ruuxa Quduuska ah ee barakeysan, oo ah isha raaxada oo dhan, waxaan kaa baryayaa inaad naftaada igu qanciso hadiyadahaaga badan.
Waxaad tahay rajadayda iyo gaashaankayga dagaalka, Oo waxaad ii tahay qalcaddayda markay jiraan dhibaatooyin iyo cidhiidhi.
Sababtaas aawadeed ayaan ugu jilba joogsadaa hortaada si aan kaaga codsado inaad gacantaada u fidiso caawimaad oo aad ii barido Ilaaha Aabbaha ah inuu helo gargaarkiisa degdega ah.
Ruuxa Quduuska ah ee jannada, xoog yeelo xooggayga oo u kordhi geesinimadaada si aan u sii wado dagaalka aan wajahayo, fadlan dhegahaaga u ducee baryootankayga oo ii oggolow waxa aan doonayo oo aan ku weydiisto maalintaan.
Fadlan qalbigayga ku iftiimi jacaylka Ilaah ee iftiimiya qalbiyada aaminkaaga. Jacaylkaaga, Awooddaada iyo Naxariistaada waxaan kaa codsanayaa inaad iga xoreeyso dhibaatooyinka oo dhan, oo inaysan wax nabadeyda wax u dhimeyn ama dhibaato igu geyn.
Saddexanka Quduuska ah, waxaan kuugu imanayaa kalsooni buuxda adiga iyo aaminaadda naftayda oo dhan, si aad uga takhalustid murugada igu kicisay silica weyn, fadlan bogsii nabarrada qalbigayga isla markaana ku shub naxariistaada aniga iyo tan aan ugu baahanahay wax badan deg deg:
(U sheeg Saddaxanka Quduuska ah waxaad u baahan tahay si degdeg ah oo weydiiso caawimaaddooda sharafta leh)
Ilaaha Aabbaha ah, waad ku mahadsan tahay maxaa yeelay waxaad dhageysataa baryadayda, jacaylkaaga aawadiis infinito, iyo nabadgelyada jacaylkaagu i siiyo, ee i magan gelisa oo ii keenta raaxo.
Waxaan kaa baryayaa inaad i caawiso, Saddexanka Quduuska ah, waxaan kaa codsanayaa shafeecaadda iyo mudnaanta ay leedahay Maryantii bikradda Barakeysan, Hooyo Ciise iyo hooyadeen.
Ma jeceshahay salaadda cibaada Quduuska ah jacayl?
Jacaylku had iyo jeer waa mashiinka salaaddayada, haddii ay nagu riixdo inaan weydiisano kuwa kale ama aan weydiisanno jacayl inaan ka gudubno waddadeenna.
Si kasta oo ay ahaataba, waxa muhiimka ah waa in qalbiga laga weydiiyaa, ka nafta iyo iimaan badan.
Waxa salaaddaheena ka dhigaya mid awood leh oo aan jawaab u helno waa inaan rumeysan nahay in wixii aan weydiisanno la siin karo.
Codsashada jacaylka, si aan u ogaano sida loo garto xilligan la joogo inuu ka gudbo jidkeenna waa muhiimada ugu weyn tan iyo markii ereyga Ilaah barayo in wadnuhu khiyaaneeyo oo uu inaga yeelo inaan rumeysanno inaan helno jaceyl markii uusan ahayn.
Tani waa sababta haysashada hagidda Saddexmidnimada Quduuska ahi ay u dhowdahay ficil nolol iyo geeriba leh.
Salaadda Cibaadada Quduuska ah kiisaska adag iyo degdegga ah
Saddexmidnimada Quduuska ah, Saddexanka Ilaah iyo Kow, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, bilowgeenna iyo dhammaadkeenna, oo hortaada ku sujuud; Adiga, Saddexanka Quduuska ahi waa sharaf, sharaf iyo ammaan weligiis, waxaan kugu aaminsanahay qalbigayga oo dhan waxaanan kuu rajaynayaa inaad kuu noqotid caabudaada aaminka ah, waxaan kuugu imid kalsooni buuxda oo aan kaa codsado inaad i aragto markasta oo aan ka xoroobayo xumaanta iyo sidoo kale dhammaan Dhibaatooyin iyo dhibaatooyin, iyo baahiyadayda, waxaan kaa baryayaa inaad raalli iga ahaato.
Aabaha Jannada, Ciise Adhijirka wanaagsan, Ruuxa Quduuska ah, waxaan kaa baryayaa baryootanka iyo mudnaanta gabadha Maryan ee barakeysan, i siiso gargaarkaaga, hagidaada iyo ilaalinteeda dhammaan arrimaha noloshayda ku saabsan.
Mahad waxaa leh Ilaaha Aabbaha ah, oo kuu ah wanaagga iyo xigmadda daa'imka ah, nolosha ayaa kaa timaadda, jacayl baa kaa soo baxa, wakhti kasta ku shaqee si caddaalad iyo miyir leh si aad ugu raaxaysato badeecadda iyo tacsiyada aad ii soo dirto; Xusuusnow inaan anigu ahay cunuggaaga, oo u naxariiso dhibatadayda, baahiyadayda oo i kaalmee xaaladdan adag:
(Weydiiso kalsooni weyn waxa aad rabto inaad ku guuleysato)
Waad ku mahadsantahay, Aabe naxariis badan oo meesha joogtay.
Mahad Eebaa iska leh Wiilka llaaha jannada ah ee naftaydu qalbigiisa Quduuska ah ilaalinayso, i bar inaan si aamin ah ugu baryo noloshaada iyo wanaaggaaga, i sii adkayn iyo adkeysi aan ku dhammaystiro baristaada oo iga dhig inaan ku tabaruco sadaqooyin badan oo aan shaqeeyo, ha i dayicin halganka maalinlaha ah, iga xoree cilaaqaadka uu cadowgu iga haysto, iga fogee oo iga ilaali dhibaato kasta oo i dhibaysa oo igu siiya kaaliyahaaga mucjisada ah ee dhibaatadan: (ku celi dalabka rajo weyn).
Waad ku mahadsan tahay Ciise wanaagsanow inuu garab istaagay waqtiyo rajo xumo iyo murugo.
Ammaanta Adiga ayaa leh, Ruuxa Quduuska ah, caddeynta wax walba iftiimiya, oo aad tahay farxadda, wada noolaanshaha iyo farxadda abuurka, ka dhig mid had iyo jeer u adkeysan kara dhiirrigelintaada rabbaaniga ah ee aad i siiso nabad, igu caawi caawimaada xagga dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka ah oo aad i caawiso si aan ugu guuleysto waxa aan ugu baahanahay hadda.
Waad ku mahadsantahay Ruuxa Jacaylka ee rabaani inaad i caawisay markii waxkastoo mugdi ah aan u baahnahay Iftiin.
Hooyo iyo boqoradda anigaa ah, Marwada Jannada Adiga oo aad ugu sii dhow Atiriimka Quduuska ah adaa ii duceeya dhibaatooyinkayaga hadda iyo gafafkayga ku jira, noqo Qareenkeyga iyo badh si ducadaydu u soo xajiso, iga dhig mucjiso aan aad ugu baahnaa noloshayda
Waad ku mahadsantahay hooyaday gacaliyahay, Maryan barakeysan oo barakeysan, sida aad u fahamtay oo had iyo jeer u hoggaansan shuruudaha.
Saddexanka ah Ilaahnimadu, Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, naxariistaada ii sii, naxariistaada ii bixi, oo si dhaqso ah iigu dar murugada iyo walaackayga.
Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, Barakaysan iyo Kan Quduuska ah ee Quduuska ah, waan ku jeclahay, waan ku jeclahay waana ku siiyay jiritaankayga.
Saddex Jacayl, Ilaaha naxariista leh, Waxaan naftayda u daayay doonistaada rabbaaniga ah, waayo waqtiyadaadu waa kaamil yihiin oo waad ogtahay waxa aniga iigu fiican, Ammaan Aabbihii, ammaanta Aabbihii, Ammaanta Aabaha Ruuxa Quduuska ah, ammaanta Barakada iyo midaysan Trinidad, sidii ay ahayd bilowgii, hadda iyo weligiisba, weligiis iyo weligiisba.
Xaaladahaas oo ah wax aan bini-aadam ahaan suura gal ahayn oo aannu qaban karno.
Xaaladahaas oo ay na siiyeen baadhitaan caafimaad, halka xubin qoys ka mid ahi ku baaba'ay, halkaas oo ilmuhu u baahan yahay caawimaad Ilaahay oo aanu garanayn ama aanu rabin inuu wax weydiisto, silica, xanuunka, itaal darrida, deganaansha la’aanta iyo duruufaha iyo shucuurta qaarkood oo inaga dhigaysa rajo daran Iyagu waa kuwa gacanta xoogga Ilaah gacantooda ku xoogaystaa.
Salaadda cibaadada Quduuska ah waxay noqon kartaa gargaaradeena dhowaan inta lagu gudajiro dhibaatooyinka ugu adag ee la xalliyo.
Waxkasta waa ficil iimaan iyo aaminid Rabbiga, isagoo rumeysan inuu waxkasta xakameynayo oo uu ogyahay wuxuu sameynayo.
Ka gaabin difaac
Waan ku qirayaa oo waan ku xushmeeyaa, Maryahow Barakaysan, Boqoradda jannada, Marwada iyo Aabbihii jannada, sida gabadha aabbaha daa'imka ah, Hooyada wiilkeeda aadka loo jecel yahay, iyo Aroosadda Jacaylka ah ee Ruuxa Quduuska ah; Oo waxaan ku sujuuday cagihii haybaddiisa weynaantiisa ugu weyn waxaan kaa baryayaa sadaqaddaas sadaqada ah; inaad ku buuxsantay rajadaada jannada, inaad iga dhigtay nimcooyin iyo naxariis gaar ah inaad igu hoos gelisay aaminkaaga aaminka ah ee aaminka badan, iyo inaad igu heshay tirada addoommadaada aad u faraxsan iyo nasiibka badan ee aad ku naaxisay naasahaaga bikradda ah.
Hooyo, iyo Hooyaday naxariis badan, aqbal qalbiyadayda dhibaataysan, xusuustayda, doonisteyda, iyo awoodaha kale ee gudaha iyo dibadda iyo dareenkeyga; Aqbal indhahayga, dhegahayga, afkayga, gacmahayga iyo cagahayga, u xukumi sidaad u aqbali karto wiilkaaga, si uu dhaqdhaqaaqyadiisa oo dhan ugu talagalo inuu kugu ammaano.
Iyo xigmaddaas oo uu wiilka aad jeceshahay kuu iftiimiyey, waxaan ka baryayaa oo iga baryayaa inaad ii soo gaadho iftiin iyo caddeyn si aad naftayda u ogaatid, wax aan jirin, iyo gaar ahaan dembiyadayda, inaad necbahay oo aad iyaga necbaato had iyo jeer, oo weliba aad iigu soo gaadho iftiinka si aan u ogaado dabinka ee cadowga umusha iyo dagaallada qarsoon iyo kuwa muuqda.
Gaar ahaan, hooyo naxariis badan, waxaan kaa baryayaa nimcadaada ... (xusid).
Tan salaad mucjiso ah Ala Santísima Trinidad si aad u weydiisato caafimaadkeena, ilaalinteena iyo barwaaqadeenu waa mid aad u xoogan!
Na ilaaliya, na daryeelaa y na hanuuni in la sameeyo waxa uun doonista Ilaah. Waxaan dalban karnaa badbaado nafteena ama ehelkeena iyo saaxiibadeen.
Xusuusnow in tabarrucahan wanaagsan oo dhan ay inaga soo socdaan wax kasta oo nagu xeeran.
Ma jiraan wax ilaahnimadiisa ilaah ahi inaga ilaalin karin, ma jiraan wax ka xoog badan ama ka awood badan ilaahay, waa tan tan aan ugu kalsoonahay inuu isagu yahay kan ina daryeela annaga iyo kaayaguba meeshuu doono ha joogee.
Waad tukan kartaa markasta oo aad rabto.
Baryada salaadda cibaadada Quduuska ahi ma leh maalin ku habboon, saacad ama daqiiqad ku habboon.
Waa inaan tukanaa markaan rabno inaan tukanno. Waa inaan aaminno oo aan had iyo jeer aaminaa in wax waliba si hagaagsan u socdaan.
Ducada Saint Martin Knight